ရုပ်ရှင်မှအမှတ်တရများမပါဘဲထာဝရစိတ်အရောင်များကိုထုတ်လွှင့်သော 44 စာပိုဒ်တို | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ရုပ်ရှင်မှအမှတ်တရများမပါဘဲထာဝရစိတ်အလင်းအရောင်မှရုပ်ရှင်မှစာပိုဒ် ၄၄ ခု။
"ထာဝရအမှတ်ရစရာမရှိသောစိတ်၏အရောင်" ရုပ်ရှင်ကိုသင်မြင်ဖူးပါသလား။ အထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေအနေများကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါကသင်မြင်သောအခါသင့်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့မည့်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ သင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးသင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရပေမည်။ သင်၏နှလုံးကြေကွဲနေသောကြောင့်လောကသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဟုခံစားမိနိုင်သည်။
နာကျင်ဖွယ်အမှတ်တရများကိုသင်၏စိတ်ထဲမှဖျက်ပစ်ချင်သည့်အချိန်များရှိသည်။ သို့မှသာပုံမှန်ဘ ၀ ကိုပြန်ရနိုင်မည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကော။ ဒါကကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတဲ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းပါ။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ရုံသမိုင်းတွင်အချစ်ဆုံးရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား၎င်းကိုအနည်းငယ်ပိုမိုသိစေချင်သည်။
နောက်တော့မင်းက“ စိတ်ထဲထာဝရပျောက်ခြင်း” အမှတ်တရတွေထဲကတချို့ကိုမင်းတို့ထားခဲ့လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းကိုမြင်ရင်မင်းသတိရတဲ့အခါမှာမင်းအစာအိမ်ထဲထည့်ပြီးမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ သင်ပြောသည့်အတိုင်းသူတို့တကယ်ကောင်းသလားဆိုသည်ကိုအမြန်ဆုံးကြည့်ရှုရန်လိုလိမ့်မည်။ ဤလှပသောစကားစုများကိုမမေ့ပါနှင့်!
မင်းကကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ ပြီးတော့အရမ်းသန့်ရှင်းတယ်၊ သန့်ရှင်းတယ်။ ငါတို့လူကြီးများသည်ဤရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဝမ်းနည်းဖွယ်ရာများ၊
ငါ့ကိုသတိရပါ။ အကောင်းဆုံးလုပ်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့လုပ်နိုင်တယ်။
ငါအခုပဲသေနိုင်တယ် ငါအရမ်းပျော်တယ် ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမခံစားဖူးဘူး ငါရောက်ချင်တဲ့နေရာအတိအကျပဲ။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းဟူသည်လူတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းလိုချင်သောနေရာနှင့်သေခြင်းသို့ရောက်သောအခါစိတ်မပျက်သည့်နေရာများဖြစ်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အချိန်များစွာအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းသည်သူစိမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရန်သာနာကျင်သည်။
အပြစ်မဲ့ Vestal ၏ကံကြမ္မာသည်မည်မျှပျော်ရွှင်ပါသနည်း။ ကမ္ဘာကြီးကမေ့နေတယ် အစက်မရှိသောစိတ်၏ထာဝရနေရောင်ခြည်။ ဆုတောင်းချက်အားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအလိုဆန္ဒအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
အချင်းလူ၊ ကြည့်ရှုပါ၊ ငါပြောမယ်၊ ငါရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဒါဆိုမင်းရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာမင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုန်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါနှင့်အတူနေလိုလျှင်၊
သာလျှင်ငါအသစ်တစ်ခုကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ဘူး။ ငါမသိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မျက်လုံးချင်းမဆုံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းပါးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဤမျှလောက်အချိန်ပေးခြင်းသည်သူစိမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရန်အလွန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏စိတ်ထဲမှသူတို့ကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်နှလုံးသားထဲမှထိုအရာများကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ ထိုအရာသည်ခြားနားသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ယောက်ျားအတော်များများကငါဟာအယူအဆတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်၊ ငါသူတို့ကိုဖြည့်စွက်ပေးတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါသူတို့ကိုရှင်သန်စေတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာစိတ်သောကရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ ဒါကြောင့်ငါသည်လည်းမင်းရဲ့ဥစ္စာကိုရှာတော့မယ်မထင်ဘူး
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လူသစ်တစ် ဦး နှင့်သာတွေ့ဆုံနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မသိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မျက်လုံးချင်းမဆုံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာမရှိနိုင်ဟုထင်ပါသည်။
ငါ Clem အခုအချိန်မှာသေနိုင်ဘူး။ ငါရိုးရိုးလေးပါပဲ ငါရောက်ချင်တဲ့နေရာအတိအကျပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေးဗစ်နှင့်ရုသ် Laskin ဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ချင်တာလဲ ငါကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်ငါရုသဖြစ်ကြိုက်တတ်တဲ့။
စားသောက်ဆိုင်တွေမှာမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့စုံတွဲတွေလိုငါတို့လား။ ညစာစားချိန်မှာငါတို့သေပြီလား ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီလိုစုံတွဲတွေလိုလူတွေရဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်မခံရပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ငါကောင်းကောင်းမလိုအပ်ပါဘူး ငါဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သူ့ကိုမျှမလိုအပ်ပါ။
ငါကလေးဘဝတုန်းကငါရုပ်ဆိုးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ (…) ကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက်ရှစ်နှစ်ရှိပြီးဤအရုပ်များရှိသည်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကကလီမန်တိုင်းအမည်ရှိအရုပ်ဆိုးသောအရုပ်ဖြစ်သည်။ သူကသူမကိုအော်ဆဲဆဲ - မင်းကရုပ်ဆိုးလို့မရဘူး။ လှတယ် သူမကသူမကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။
ငါထင်တာကတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် Valentine Day အတွက်ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။ ဒီနေ့လူတွေကိုအမှိုက်ကဲ့သို့ခံစားမိစေရန်နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ကုမ္ပဏီများကတီထွင်သည့်ပွဲဖြစ်သည်။
မင်းငါ့ကိုဂျိုအဲလ်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူး။ ငါပွင့်လင်းစာအုပ်ဖြစ်၏ ငါအရာအားလုံးကိုပြောပြ, fuck ဆိုတဲ့ရှက်စရာအရာ။
ခင်ဗျားအမြဲတမ်းရေးနေတဲ့ဒိုင်ယာရီအချို့ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ ခံစားချက်၊ ကိလေသာစိတ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမကင်းဘူးဆိုရင်အဲဒီမှာမင်းဘာရေးလဲ။
ကျွန်တော်မသိပါဘူး! ကျွန်တော်မသိပါဘူး! ကျွန်တော်နားမလည်ဘူး! ကျွန်တော်ကြောက်တယ်! ငါကပျောက်ကွယ်သွားတူသောငါခံစား! ငါ့အရေခွံပျက်နေသည်! ငါအိုပြီးပြီ အဘယ်အရာကိုမျှသဘာဝကျပါတယ်!
သူကကျနော့်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော့်စကားတွေ၊ သူကသူမရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုခိုးယူလိုက်တယ်။ အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ၊
စုတ်ပြဲထားသောစာမျက်နှာများရှိသည်။ အဲဒီလိုလုပ်တာကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ နှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နာရီနဲ့နာရီကြာစကားပြောနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအရာရာအကြောင်းပြောနိုင်တဲ့အချက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်။ အဲဒါပြီးပြည့်စုံတယ် ဤအရာအားလုံးတွင်ဘာမှမမှားနိုင်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » ရုပ်ရှင်မှအမှတ်တရများမပါဘဲထာဝရစိတ်အလင်းအရောင်မှရုပ်ရှင်မှစာပိုဒ် ၄၄ ခု။
Gera MxM အားဖြင့် 30 စာပိုဒ်တိုများ